Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » नेकपा नेताकै माग : भ्रष्टाचार रोक्न ओली, प्रचण्ड र देउबाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ
नेकपा नेताकै माग : भ्रष्टाचार रोक्न ओली, प्रचण्ड र देउबाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ
काठमाडौँ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीे (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ । विभिन्न समुहहरु बनाएर छ’लफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा नेकपाको सरकार आएपछि भ्र’ष्टाचार कमी आएको दाबी गरिरहँदा केन्द्रीय सदस्यहरूले भने नेताहरूकै सम्पत्ति छा’नविन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेकपाको नेताहरूले नै थोरै समयमै धेरै सम्पत्ति जोडेको हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिमाथि छान’विन गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य सुरेशकुमार राईले माग गरेका छन् ।
अ’वैध काममा समेत नेताहरुको सं’लग्नता भएको आ’रोप लाग्ने गरेको हुनाले त्यस्तो क्रि’याकलाप रोक्नको लागि भए पनि नेताहरुको सम्प’त्ति छान’विन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू भ्रष्टा’चार रोक्न हो भने पहिला तपाई, क. प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुुर देउवाको सम्पतिमा थि छा’नविन हुनपर्यो । नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले प्रतिवेदन पेश गर्दै पार्टी नेतृत्वदेखि सरकारसम्मको सोचेअनुरुप कुनै काम गर्न नसकेको प्रष्टा’ए।
प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुले विकास निर्माणबारे बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउनन नसकेको भन्दै शाहा नेतृत्वमाथि खनिएका थिए । संघीयतापछि तीन तहको सरकार निर्माण भए पनि जनताले सोचअनुरुप कुनै काम गर्न नसकको केन्द्रीय सदस्य कमला रोकाले बताइन् । बैठकका बोल्ने क्रममा तीन तहको सरकार निर्माणपछि जनताले थप दुख पाएको औँल्याइन्। स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि पालिकास्तरबाटै झन् ठूलो भ्र’ष्टाचार निम्तिएको उनको भनाइ छ।
सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्रीको रात्रिभोज, गएनन् केही सांसद र नेता
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूका निम्ति रात्रिभोज आयोजना गरेका छन्। पाँच दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले रात्रिभोजमा बोलाएका हुन्।
सुरूमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सांसदहरूलाई साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भोजको निम्तो पठाइएको थियो। नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीका तर्फबाट मोबाइलमा ‘म्यासेज’ पठाइएको थियो।
सांसदहरूलाई मध्याह्नमै खबर गरियो भने केन्द्रीय सदस्यलाई साँझ बैठक सकिने बेला मात्रै जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक समापन मन्तव्यको अन्तिममा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बालुवाटारमा निम्तो दिएका थिए।
रात्रिभोजबारे आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको भाषणक्रममा मात्रै थाहा पाएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। भोजमा सांस्कृतिक प्रस्तुति र ‘ड्रिंक्स’ बाहेक सबै खानेकुरा रहेको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताइन्।
‘खानामा माछा-मासुका सबैखाले परिकार थियो। खानापछि डेजर्ट थियो,’ उनले भनिन्, ‘बोल्ने कार्यक्रम केही थिएन। खाने र गफ गर्ने मात्रै। म केही बेर बसेर फर्किएँ।’
बैठकको अन्तिम दिन केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू बीचमा हार्दिकता बढाउन प्रधानमन्त्रीले रात्रिभोज गरेका केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले बताए।
‘यो भोज केन्द्रीय सदस्य र सांसदको एउटा अनौपचारिक भेटघाट अवसर हो,’ उनले भने, ‘बैठकमा सबैजसो केन्द्रीय सदस्य र सांसदको उपस्थिति थियो।’
केही नेता र सांसद भने रात्रिभोजमा सहभागी भएनन्। केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री, लेखनाथ न्यौपाने, ठाकुर गैरे, हेमराज भण्डारी लगायत बालुवाटार गएनन्।
‘बैठकमा नेताहरूको सम्पत्ति र आचरणबारे यति धेरै कुरा उठाइयो। बैठक लगत्तै सरकारी निवासमा भएको भोजमा कसरी सहभागी हुनु? मलाई त्यहाँ जान मेरो नैतिकताले दिएन,’ भोजमा नगएका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारी खर्चमा भोज गरेर कस्तो सन्देश दिन खोजको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले आफ्नो स्वभाव यस्ता भोजमा नजाने खालको रहेकाले नगएको बताए।
‘भोजमा म मेरै स्वभावले नगएको। पार्टी एकता भएपछि बालुवाटारमै भएको भोजमा पनि सहभागी थिइनँ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा तडकभडक नहोस् भन्ने जनताको चाहना छ। मलाई पनि यो कुरा ठिकै लाग्छ। तर मेरो हैसियतले यस्ता कार्यक्रम रोक्न नसक्ने भएकोले म नगएको हो।’
आफू बिहे वा व्रतबन्ध जस्ता भोजमा पनि नजाने उनले बताए।
अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले भने भोजमा राति हुने र आफूसँग साधन नभएकाले नगएको बताए।